Midnimada OpenSUSE? Maya Laga soo bilaabo Linux
dabogal 92 | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux, Noticias
Xalay, anigoo ku dhowaaday waqtiga jiifka, waxaan soo xasuustay galitaan aan akhriyay bilo ka hor, kaasoo sharxayay inuu dhaqmayo Midnimada en furanSUSE, kiiskan, Midnimada 2D. Ka dib hadal badan oo ku saabsan baloogyada iyo fagaarayaasha, bilo ayaa naga soo wareegtay mana aanan helin wax war rasmi ah furanSUSE, wixii ku saabsan horumarka mashruuca.
Waxaan ugu dambeyntii go'aansaday inaan la xiriiro horumariyeyaasha Furan , yaa iigu jawaabay
Dekedda Midnimo si loo furo SUSE weli ma noola, qofka samaynaya markii hore xiiso dambe uma lahan iyo furitaanka 'SUSE' oo horeyba dad badan u soo bandhigey desktops, ma jirin falcelin togan oo ku filan oo ku saabsan midnimada OpenSUSE dadaal in kuwa kale ku soo boodeen.
Dekedda Midnimo ma noola, qofkii marki hore sameeyey ma xiisaynayo, iyo Opensuse waxay bixisaa deegaanno badan oo desktop ah, ma jirin wax falcelin togan ah oo laga qabtay dekedda, dadaal dad kale uga boodeen.
Marka nabad galyo rajada aragtida Midnimada en furanSUSE, qof kastaa xor buu u yahay inuu dhiibto ra’yigiisa, laakiin ugu dambeyntii waxay u muuqataa taas oo kaliya Canonical waxaad xiisaynaysaa socodsiinta miiskan Shell.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Midnimada OpenSUSE? Maya
Haddii Midnimadu jeceshahay 4 bisadood, dhab ahaan khalad kuma laha dadka isticmaala.
Qof kastaa wuxuu go'aankan u gaaraa wax.
4 bisadaha = Ku dhowaad qof kasta oo Ubuntu u adeegsada noocyadeeda Midnimo? : O XD
Haa, badankood waxay doorbidaan Gnome Shell ama deegaanno kale, waxaad tahay tusaale wanaagsan maxaa yeelay waxaad isticmaashaa Kubuntu.
Waxaan isticmaali jiray Kubuntu tan iyo ka hor intaanay Midnimadu jirin, markaa kuuma sheegi karo haddii aan tusaale fiican ahay iyo in kale xD
Midnimadu waxay leedahay waxyaalaheeda wanaagsan, waxa aniga i cajabiya waa Lenses, ma jiraan wax la mid ah KDE?
Nope, ugu yaraan maahan inta aan ogahay
Way cadahay inay taasi dhaceyso. OpenSUSE waa degmo beel, maxay u taageeri kartaa deegaan aan ahayn? Maxay kuwa doorbidaya GNOME ee doonaya inay badbaadiyaan waayo-aragnimada murugada leh ee Shell ay heli doonaan waa keyd taxaddar leh oo leh Cinnamon.
Ku jawaab MetalByte
Dhab ahaan Waxaan qabaa taas Ubuntu waa inuu joojiyaa balastar aad u badan, sidaa darteed Midnimada waxaa loo isticmaali karaa qashinka kale, sida Debian tusaale ahaan. Waa waxa ugu yar ee ay sameyn karaan.
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, taageerida wax Ubuntu aysan taageerin dadka kale, waxaan u maleynayaa inay ahayd waqti lumis ...
Shakhsi ahaan, kuwa aan ugu jeclahay waa qolofta gnome iyo midnimada, midnimadu waa wax iska fudud in la isticmaalo, waxa dhacaya ayaa ah in aysan wali lahayn "qaan-gaarnimada" qolofta gnome ama kde, xitaa sidaas darteed waxaan ka helayaa muraayadaha indhaha iyo habka loo waafajiyo miisaska aad wax u soo saaraan Sidoo kale marka la isku daro waxay umuuqataa mid cajiib ah, waxa ugu xun ayaa ah inay madax xanuun tahay in la habeeyo, way ka culus tahay oo ka gaabinaysaa qolofta gnome waxayna siisaa xoogaa dhibaato ah isku darka.
Dembiga dhexdiisa, waxa aan ugu jeclahay waa xaqiiqda haysashada xorriyadda beddelka iyo isticmaalka kombuyuutarrada kala duwan ee Ubuntu! 🙂
Waan ku saxay, G-Shell runti ma bisla, wuxuu u baahan yahay inuu koro, laakiin wuxuu ku socdaa waddo ka wanaagsan Midnimada, waa in la qiraa.
Midnimadu ma xuma, wax walbana waa sidii horay loo sheegay, Canonical ma taageereyso in lagu wareejiyo kumbuyuutarrada nidaamyada kale maxaa yeelay, si fiican, ma muuqato wax dan ah. Mararka qaarkood Canonical wuxuu u dhaqmaa sida Apple ama Microsoft, laakiin taasi maahan sababta Ubuntu loo cambaareynayo, sida geesinimada had iyo jeer loo sameeyo, maadaama ay jiraan waxyaabo dhab ah oo ku saleysan Ubuntu, sida LinuxMint.
ufffffffffff walaalkay correctisimooo !! +100
Waa waxa aan dhahayo. Tag Ubuntu sida qaybinta, oo leh bakhaar weyn, oo aan ahayn Midnimada iyo fikradaha kaligood-is-weydaarsiga iyo baayacmushtarka (oo aan mararka qaarkood dhaliil ahayn) Mark Shuttlworth. Waa la isticmaali karaa Ubuntu leh jawi kale oo desktop ah iyo voila. Faham in yoolka ah Midnimada isaga kaliya ma ahan desktop, laakiin wuu sii socdaa: TV, Telefoonno, Kiniinno ..
Fahmay ... ma la dhihi karaa adeegsiga lint mint wuxuu adeegsanayaa ubuntu laakiin midnimo la'aan?
lint mint waxay isticmaashaa bakhaarka weyn ee ubuntu ??
Dabcan wuu adeegsadaa, oo wuxuu siiyaa taabashadiisa gaarka ah. Halkaas ayay qorraxdu ka timid.
markaa waxaan dhihi karnaa xalka xarrago leh ee ubuntu waa Linux Mint xD
Dadku waxay jecel yihiin Ubuntu ... qaar badana waxay wax ku liqaan Midnimo (waqti la'aan7 aqoon). Tani maahan mid la mid ah jeclaanshaha Midnimada. Wax cusub oo ku soo kordha Linux ayaa indhahaagu qaban doonaan…. laakiin… aniga ahaan… waqti badan oo horumar ah ka dib wali waa mid aan la aqbali karin, dhamaantiisba way ka sii wareersan yihiin oo waxay ku cadaadiyeen laba meelood oo aasaasi ah…. iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in loo tago «balastar» nidaamyada si isdhexgalka u shaqeeyo, iwm, iwm. puufff.
Hantida miisaska kumbuyuutarradu waa guul Linux ah oo waqtiguna qof walba wuxuu dhigayaa meeshiisa - goorma ayay Kanonical dib u laaban doontaa?
Waxa kaliya ee iga soo wacaaya Midnimadu waa muraayadaha indhaha, oo ah wax aan sida xaqiiqada ah awoodi doonno inaan ku aragno maalin maalmaha ka mid ah KDE haddii barnaamij-bixiye ku dhiirrado. Sababtoo ah waa maxay qaybinta walxaha waxaa lagu gaari karaa KDE (Icon-Tasks halkan, Global Menu halkaas waana taas), iyo xitaa intaa ka sii badan haddii plazma Elly theme la isticmaalo.
midnimo ?? pfff ahahaha fadlan! Waxaan doorbidaa qorfaha .. waligey ma fahmi doono waxa ay u maleynayaan dadka u janjeera marka ay ikhtiraacaan taas .. ma aysan dhigi karin baarkaas hadii ay ahaan laheyd nabar xirasho laakiin waxay dhigteen dhanka bidix si ay wadada ugu sii dhacdo
waan ka xumahay qaladkeyga higgaadinta 😉
Aja ayaa sii waday, waxa ugu fiican ayaa ah inay durbaba ogaadeen musiibada ay sameeyeen midnimo hadana si wanaagsan ayey u ogaadeen.
Waan ku faraxsanahay inaan ogaado in nooca 12.04 aad ku rakibi karto "gnome-panel" oo ah nooc ka mid ah gnome 2 ama ugu yaraan wax aad isugu eg. Tani waa sida qolofka gnome3 ay ahayd inay sidan ahaato ... waxay umuuqataa gnome 2 ... Waxaan aad ugu kalsoonahay in badankood ay rakibayaan xirmadaas ... ayna midnimada kaqaadayaan khariidada sii deynta xigta. ahaha
Waxay ila tahay aniga in RAE-du ay fiirinayso carcamal
Geesinimo muxuu macnaheedu yahay RAE?
Akadamiyadda Isbaanishka ee Boqortooyada Isbaanishka.
Waxaan u maleynayay in dhammaan waddamada ku hadla Isbaanishka ay ku ogyihiin iyada, inta badan qaamuusyada iyo intaas oo dhan.
Iyo in Venezuela ay leeyihiin naxwaha Andres Bello ...
hahahaha ok ok hada hadaan fahmay .. sifiican ayaan markale uga cudurdaaranayaa qaladaadkeyga higgaadinta, muhiimadu waxay tahay inay fahmeen fariintayda.
@ jamin-samuel waa wax xun, "waxaad heleysaa farriinta" qaar badan oo ka mid ahi wax khalad ah kamay bixin higgaadinta.
Ma waxaan dib ugu laabanaynaa hingaaddii? Fuck Courage, waa wax sifiican loo fahmi karo inaad kuhadasho oo sifiican wax uqorto, taas lama dafiri karo, laakiin waxaa jira dad inkasta oo ay xanuujiso, hadana loo isticmaalay inay si xun wax u qoraan, Venezuelana tani waa aafo, waxaan kuu sheegayaa.
Waxyaabaha ayaa ah, si gaar ah u hadlaya, in noqoshada higaad, cunug qaali ah, meelna ma aad gaadhid, ma saxdid ama qofna ma fahamsiisid ugu dambayntiina, waxa aad ku dambaynayso inaad samayso ayaa dhibaysa qofka isticmaala ama oo olol dam ah baa la abuuray ... xoogaa deji oo sax wixii run ahaantii la ogaan karo.
Hagaag, uma baahnid inaad afkaaga si sax ah u furto, waxaad i siisaa inaan kula shaqeeyo maqaalladaada iyo Hoyganismo.
Sidoo kale fiiri yaa yiri horta yaa cafiyey higgaadinta.
Keliya Venezuela, laakiin halkan waxaan sidoo kale ku ogahay HOYGANS oo wax u sheegaya qaab Tuenti ah:
Waxaan ku jiraa baroordiiq, waxaa jira pari? lego boy goob
Kee baa aad uga xun waxa aan halkaan ku aragno, waanan khiyaaneeyaa laakiin waxay igu yiraahdaan iska daa hahahaha.
Midnimada ma laga saarayaa khariidada? Hadday sii daayeen nooca 5.8
Anigu waxaan doorbidaa Midnimada (in kastoo aysan aad u badnayn siyaasadaha gaarka ah ee Canonical), marka loo eego Cinammon. Waxaan arkaa wax badan oo suurtogal u ah la qabsiga dhowr meelood, waxaan sidoo kale arkaa bilic ka wanaagsan, in kastoo qaar badani aysan jeclayn, arrinta Lens waxay iila muuqataa mid xiiso badan ii leh. Waxaan doorbidaa Xfce kun jeer, oo aan hadda tijaabinayo oo ay gebi ahaanba igu qancisay, marka loo eego Cinammon. Kaliya waa qadarinteyda shaqsiyeed.
Taasi ma adigaa leh Cinnamon waa cajiib.
Sikastaba, muxuu qorfe leeyahay oo aadan waxba ka helin haba yaraatee?
Mid yar oo fudud oo fudud oo fudud ... midnimada waxaa loogu talagalay shaashado casri ah qaabka 16: 9, oo aad ku kala ballaadhsan tahay ... ma garanayo adiga laakiin ku xirnaanta midnimadu waa mid wax ku ool ah oo wax ka qabata, in ka badan kuwa kale ee ku jira Linux, muraayadaha hud waa mid kale oo laga kasbaday midnimada, waxay oggol yihiin awood raadinta maxalliga ah oo aad uga sarreysa xitaa qolofta gnome, waa deegaan wanaagsan xitaa haddii aadan jeclayn, dadka jecel inay dhaqso u dhaqaaqaan haddana aysan fahmi karin sababta ay saxaro aad u badan ugu tuuraan ...
Dhanka qorfaha, ma jecli fikradda ama hirgalinta ... kumbuyuutarrada aan ku tijaabiyay saameyntooda waa kuwo fool xun oo aan loo baahnayn in la yiraahdo bilowga ... waa sida nuqul xun oo kde ah ... (feker shaqsiyeed)
Ku jawaab ALX
Hagaag, waxaan jeclahay midnimada mid ka fiican gnome-shell oo waligeyba waxaan ahaa ciribtire. Dakada uma muuqato inay i dhibayso, maadaama ay had iyo jeer ka shaqeyso dhanka bidix ee shaashadda, maadaama daaqadaha daaqada ay jiraan. Aniga ilama muuqato mid gaabis ah, in kasta oo had iyo jeer ay jiraan deegaanno ka culus kuwa kale, waxay la mid tahay kde, xawaaruhu wuxuu si qumman ugu habboon yahay is-dhexgalka dhammaan qalabka midba midka kale. Ma noqon karto dawada, laakiin gnome-shell sidoo kale (oo wali waa) si weyn ayaa loo dhaleeceeyay, sida markii kde4 ay soo baxday, ma jirin meel laga helo. Wax walba waa dhadhamin oo sii waqti ay ku dhalaalaan.
Waxyaabaha kale waa go'aanka Canonical ee ah in aan la horumarin marka laga reebo Ubuntu, laakiin waa mashruucooda, iyo ugu horreyntii waa inay ka shaqeysaa diiradooda, ka dibna waa la arki doonaa
dadku waxay u beddelaan xubuntu.
Qiso dhab ah ...
Waqtigan xaadirka ah Ubuntu soo socota waxay sameynayaan sida ugu fiican (waxayna ku dhawaaqayaan si xushmad leh) si loo hagaajiyo habka GNOME Fallback ee ay ugu yeeri doonaan Classic. Uma maleynayo inay tahay jacaylka isticmaaleyaasheeda iyo sida ay noqon doonto .. .. waxay noqon doontaa maxaa yeelay waxay arkayaan dhegaha yeyda. Wixii aan ka helay Ubuntu iyo ahpra ... marba marka ka sii dambeysa ayaa ka sii wanaagsan.
Miyaanay fiicnayn in si adag laysku dayo, xitaa haddii ay dhib badan tahay, in si isku mid ah loogu daro qolofta Gnome 3? Waqtiga ay u arkaan Gnome 3 Shell inuu yahay tartan adag oo ku saabsan dadaalkooda, waxbaa qaldan fikradda.
gabi ahaanba .. hadii ubuntu uu ku dari lahaa qolofta gnome wuu guuleysan lahaa .. laakiin waxaa laga yaabaa inay ikhtiraaceen midnimo si ay uga yara duwanaadaan fedora .. maadaama ay fedora isticmaasho qolofta gnome ..
anigoo qalbigayga kujira .. Waxaan jeclaan lahaa inbadan hadii Ubuntu taageerto qolofta gnome halkii ay ka ahaan lahayd midnimada.
Waxay ogyihiin in Midnimo ay Ubuntu u ahayd wixii Windows Vista ee Microsoft.
Oo hadda waad ogtahay ... maxay mustaqbalka na siin doonaan? ahahaha si fiican waxaan rajeynayaa inay tahay wax qiimo leh
Aad ayaan uga shakisanahay, halkii ay ka xishoon doonaan inay toogtaan sida ay ku sameeyaan saaxiibadeena Redmond.